आशिफको कप्तानीमा यू–१९ टोली
भारतमा हुने चार टिम सम्मिलित यू–१९ क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि आशिफ शेखको कप्तानीमा नेपालले शुक्रबार १५ सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको छ । यसअघि कोलकाताको इडेन गार्डेन र अर्को खेल स्थलमा हुने भनिएको प्रतियोगिता लखनउमा हुनेछ । त्यसका लागि नेपाली टोली सोमबार भारत लाग्नेछ ।
मलेसियामा सम्पन्न एशिया कप छनोट प्रतियोगिता खेलेर शुक्रबार नेपाली क्रिकेट टोली स्वदेश फर्किएको छ ।
साफ च्याम्पियनसिप: प्रिय प्रतिद्वन्द्वी भुटानमाथि जित
नेपालले भुटानको सामना गर्दा यति धेरै तनाव कहिले पनि महसुस गरेको थिएन । नेपाललाई डर थियो, कतै साफ च्याम्पियनसिप फुटबल २०१८ मा नेपालले भुटानविरुद्ध कुनै अकल्पनीय नतिजा आत्मसात गर्ने त होइन ?
दुईपल्टका विजेता नोभाक जोकोभिचले अस्ट्रेलियन जोन मिल्म्यानलाई पराजित गर्दै यूएस ओपन टेनिसको सेमिफाइनलमा स्थान बनाएका छन् ।
एसिया कपमा हङकङ
हङकङले यूएईमाथि २ विकेटको रोमाञ्चक जित हात पार्दै एसिया कप क्रिकेटमा स्थान बनाएको छ ।
साफ च्याम्पियनसिपः बंगलादेशले पाकिस्तानलाई हरायो
साफ च्याम्पियनसिप २०१८ को समूह 'ए' को तेस्रो खेलमा बंगलादेशले पाकिस्तानलाई १-० ले पराजित गरेको छ । बंगलादेशको राजधानी ढाकास्थित बंगबन्धु रंगशालामा राति भएको खेलमा बंगलादेशले पाकिस्तानलाई हराएको हो ।
नेपाल र भुटानबीचको खेल हेर्न नेपाली दर्शकको ओइरो
साफ च्याम्पियनसिप २०१८ को दोस्रो खेलमा नेपालले भुटानलाई ४-० ले हराएको छ । भुटानी फुटबलको स्तर माथि बढेको सोचबीच भएको खेलमा नेपाल पूर्णत हाबी रह्यो । यस जितले नेपालको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना फेरि जिवित भएको छ । नेपालले भुटानलाई हराएको यो लगातार तेह्रौंपटक हो ।
साफ च्याम्पियनसिपः नेपालको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना जिवितै
हिमेश, कञ्चन अधिकारी
साफ च्याम्पियनसिप २०१८ को दोस्रो खेलमा नेपालले भुटानलाई ४-० ले हराएको छ । भुटानी फुटबलको स्तर माथि बढेको सोचबीच भएको खेलमा नेपाल पूर्णत हाबी रह्यो । यस जितले नेपालको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना फेरि जिवित भएको छ ।
साफ च्याम्पियनसिपः नेपाल भुटानसँग ४-० ले विजयी
साफ च्याम्पियनसिप २०१८ अन्तर्गत समूह 'ए' को दोस्रो खेल नेपालले भुटानलाई ४-० ले हराएकाे छ । नेपालले खेलको पहिलाे हाफमा एक र दोस्रो हाफमा तीन गोल गर्दै जित हासिल गरेकाे हाे ।
नेपालको वास्तविक परीक्षा
भुटानी टिम र यसले खेल्ने फुटबलबारे काठमाडौंमा धेरै कथा सुन्न पाइन्छ । कुनै समय थियो, जतिबेला थिम्पु–११ का भुटानी खेलाडी काठमाडौंमा खुबै लोकप्रिय थिए । त्यतिबेला खरे बस्नेत र उनका केही साथीको नाम नसुन्ने को मात्र होला ?
मोउरिन्होको भविष्य कता ?
प्रशिक्षक जोसे मोउरिन्हो र म्यानचेस्टर युनाइटेडबीच पछिल्लो केही महिना सम्बन्ध सुमधुर रहन सकेको छैन । मोउरिन्होले क्लबको ट्रान्सफर पद्दतिलाई आफ्नो उपाधि जित्ने शैलीसँग मेल नखाने बताउँदै आएका छन् ।
लिग खेल्नमै किचलो
भवन भाडाबाटै वार्षिक एक करोड रुपैयाँ बढी आम्दानी गरिरहेको न्युरोड टिम (एनआरटी) सहित फ्रेन्ड्स र जावलाखेल युवा क्लबले ५ वर्षपछि सुचारु हुन लागेको सहिद स्मारक ए डिभिजन लिगमा प्रतिस्पर्धा गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।
भारतको राम्रो सुरुआत
मुख्य दाबेदार भारतले साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा राम्रो सुरुआत गरेको छ । यहाँस्थित बंगबन्धु रंगशालामा बुधबार छ पटकको विजेता भारतले समूह ‘बी’ को खेलमा श्रीलंकालाई २–० ले पराजित गर्‍यो । यस समूहको अर्को टोली माल्दिभ्स हो ।